Maamul shabakadaha bulshada iyo Microblog-kaaga FireStatus | Laga soo bilaabo Linux
Maamul shabakadaha bulshada iyo Microblog-gaaga oo leh FireStatus
FireStatus waa adeeg loogu talagalay shabakadaha bulshada ee badan, oo ay ku jiraan Twitter, Saaxiib-, Facebook, macaan iyo Identi.ca.
Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u dirto cusbooneysiinta xaaladdaada, qoraaladaada iyo xiriiriyeyaasha URL isku mar shabakadaha bulsheed ee badan ee ay la midowdo. Waxay sidoo kale muujineysaa cusbooneysiinta adeegyadan sida ogeysiisyada daaqadaha soo-baxa oo kuu oggolaanaya inaad si fiican ula xiriirto waqtiga dhabta ah asxaabtaada.
Aduunka mahadsanid Meel furan iyo waxtarka ay ina siiso Firefox waxaan kuugu habeynay plugin si aad u isticmaasho adeegyada (API) de DL.net TT. Waxay ku jirtaa wajiga Beta sidaa darteed waxaan u baahanahay wada shaqeynta xubnaha bulshada <° Linux si loo tijaabiyo ama loo hagaajiyo 😉
Waxaad kala soo bixi kartaa waxyaabaha soo socda isku xirka oo noo soo dir jawaabcelinyo intaad isticmaaleyso fiilada
Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay!
Xusuusin: Maqaalkan waxaa soo diray Oleksis 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Maamul shabakadaha bulshada iyo Microblog-gaaga oo leh FireStatus
Aad u fiican, laakiin waligey ma aanan isticmaalin microblogs tan iyo halkan dhulkeyga waa caado kaliya in la isticmaalo shiishada karelbook.
Hahahaha buugani muxuu ku saabsan yahay?
ee feisbooc, inuu noqdo mid sax ah. xD
@ren bueno bilaw isticmaalka DL.net TT oo noo sheeg sida aad u isticmaaleyso FireStatus 😉 Salaan!
Farxad leh, kaliya aamina koontada Openid ee aan kuu sheego. 😀
PSC (Xarunta softiweeriga ah ee la qaadan karo) waxay geyn kartaa bakhaarkaaga guryaha
Waan jeclahay ArchLinux laakiin ...